Sunday March 15, 2020 - 10:05:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobollada dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen falal dilal ah oo loo geystay dad rayid ah.
Maleeshiyo hubeysan oo qaab beeleed u abaabulan ayaa duleedka magaalada Beled Weyne ee gobolka Hiiraan ku dilay dad shacab ah, dadka deegaanka ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof oo beeralay ah lagu dilay deegaanada Burdhiile iyo Kabaxleey.
Dadka ayaa ladilay xilli ay ku sugnaateen dhul beereed, taliyaha booliska degmada Beled Weyne ugu magacaaban maamulka Hirshabelle ayaa sheegay in ay ku raad joogaan maleeshiyaadka weerarka geystay oo goobta isaga baxsaday.
Dhinaca kale Meydka gabar 12 sana jir ah ayaa laga helay deegaan dhaca duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud, wararka ayaa sheegaya in gabadha oo si xun loo dilay Meydkeeda lageeyay isbitaalka Dhuusamareeb.
Wararku waxay sheegayaan in fal dambiyeedkan looga shaki qabo gabadha hooyadeed iyo abtigeed, gabadha saqiirta ah ee ladilay ayaa xarig lagu ceejiyay kadibna indhaha ayaa kasoo dhacay sida ay xaqiijiyeen dhaqaatiirta isbitaalka Dhuusamareeb.
Gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa kamid ah meelaha ugu badan oo ay ka dhacaan falal dambiyeedyada dilalka ah